Mapaki emunyika anonetsa muna Nyamavhuvhu 30 | Ndinobva mac
Mapaki emunyika anonetsa musi waAugust 30
Zvakare isu takagadzirira kuvhura nyowani Yekuita dambudziko kune vashandisi veApple Watch uye mune ino nyaya iri dambudziko reNational Parks. Dambudziko re "kupemberera kushamisika kwechisiko kuti mapaki emunyika ari" ino inguva yekuita kurovedza kufamba, kufamba pawiricheya, kana kumhanya kweinenge 1 mamaira, yakaenzana 1,61Km.
Kudzidziswa uku kunogona kuitwa zvakananga muApple yekudzidzira application kana kushandisa chero eanowirirana anoenderana neApple Watch. Mubairo uyu unogara uri mune izvi zviitiko mupiro wehutano kumuviri wedu uye mamwe matiki ekugovana mumameseji, pamwe nemenduru yeiyo mibairo yekukiya.
Aya matambudziko emabasa anonanga nekupa kukurudzira kune avo vanoona zvichinetsa kusimuka kubva pachigaro Uye ndezvekuti nechikonzero chekuwana iro dambudziko, vanogona kukochekerwa nekutora tufambo tudiki uye izvi zvinovatungamira kune vakawanda nekuwanda. Chero zvazvingava, sarudzo yekuwana menduru nekurovedza muviri kudiki zvinoita kuti vanhu vakagara zvakanyanya vafambe, izvi zvakaratidzwa mumatambudziko apfuura uye mune yangu vakatokwanisa kuyedza Yoga, chimwe chinhu chandisati ndambo zvisati zvaitika kwandiri uye ikozvino ndinodzidzira nguva nenguva.
Chinyorwa chekutanga cheichi chinetso sekuziva kwedu parizvino chakaitwa muzhizha ra2018, kunyanya mumwedzi waGunyana uye gore rakapfuura muna2017, chakaitwa yaive dambudziko rekuita kutsigira hwaro hwemapaka emunyika. United States.yakazara, saka ndiwo makore matatu akateedzana muhuwandu. Gore rakapera dambudziko rakapihwa naApple raive nechekuita nekufambawo, kudzidziswa kweanosvika 4,8 km yaifanira kuitwa muna Nyamavhuvhu 25. Zvino iyi 2020 gadzirira kufamba anotevera Nyamavhuvhu 30 uye uwane dambudziko repaki dzenyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mapaki emunyika anonetsa musi waAugust 30
Mutsori wevasori "Tehran" uchatanga kuratidzwa munaGunyana 25 paApple TV +
Apple yakatongerwa kubhadhara zvinopfuura mamirioni mazana mashanu pakushandiswa kwemvumo yeLTE muApple Watch